samedi, 28 mars 2020 17:13
Sary: Seraseran’ny Fiadidiana ny Faritra Vakinankaratra
Fisorohana ny Covid-19: Nidina nanao fanentanana teny an-tsena ny Governoran’i Vakinankaratra
Firesahana mivantana tamin’ireo mpivarotra teny an-tsena Sabotsy no nataon’ny Governoran’ny Faritra Vakinankaratra Vyvato Rakotovao, ny Ben’ny tanàna Rasamimanana Honoré ary ireo Mpitandro ny filaminana androany ho fisorohana ny fidiran’ny tsimokaretina Coronavirus. (Sary: Seraseran’ny Fiadidiana ny Faritra Vakinankaratra) (Jereo Sary Tohiny)
550 Ariary sy 600 Ariary no ivarotan’ny mpaninjara ny iray kapoaka amin’ny vary vahiny « stock tampon » eto Masiakampy, Distrikan’i Miandrivazo amin’izao. 6500 Ariary ka hatramin’ny 8000 Ariary ny litatry ny menaka. 900 Ariary ka hatramin’ny 1300 Ariary ny iray kapoka amin’ny siramamy. Misy ihany ireo mitazona ny vidiny teo aloha saingy any amin’ny fitaovana famarana sy fandanjana indray no amboariny Kapoaka tapaka sy mizana misy fanamboarana, toy izany koa famarana menaka.
Sary: Raniah Florenciette
Amoron-dalana, tsy lavitra ny seranam-piaramanidin’i Mandritsara no nahitana vehivavy iray efa tsy misy aina intsony, androany marainan’ity sabotsy 28 marsa 2020 ity. Efa eo ampelan-tanan’ny mpitandro ny filaminana ny raharaha, nanokatra fanadihadiana avy hatrany. (Jereo Sary Tohiny)